Cilmi-baadhis Daah-furtay Hab Cusub Oo Lagu Aqoonsan Karo Dambiilaha Aan Wejigiisa La Arag | Dhamays Media Group
Cilmi-baadhis Daah-furtay Hab Cusub Oo Lagu Aqoonsan Karo Dambiilaha Aan Wejigiisa La Arag
UK (Dhamays) – Dadka dambiga geysta, gaar ahaan dambiyada la xidhiidha Carruurta ayaa waxa ay inta badan wejigooda ka qariyaan Kamaradaha, waxaana aad u adkaata in la aqoonsado dambiilaha si loo soo qabto.
Waxa kaliya ee dambiilaha laga arko ayaa ah gacmihiisa. Balse cilmi cusub oo Saynis ahoo la soo saaray ayaa waxaa lagu ogaaday in qofka wejigiisa aan loo baahnayn haddii gacmihiisa la arko, halkaasna laga tixraaci karo qofka uu yahay.
Sida ay qabto Prof Sue Black, gacan kasta waxa ay leedahay qaab-dhismeed u gaar ah, gaar ahaan sida ay u samaysan yihiin xididdada, xitaa labada gacmood ee Qofka ku wada yaalla ayaan isku qaab ahayn.
Labada qof ee mataanaha ah laftooda gacmahooda waa ay kala duwan yihiin, mana jiro qof kan kale u gacan eg.
Waxa ugu horeeya ee la eegayo ayaa ah xididada gacmaha, kuwaas dhismahooda uu soo bilowdo marka uu qofka caloosha ku jiro.
Waxaa kale oo la eegi karaa astaamaha uu qofka ku dhashay sida barta, iyo marmarka meelo ka mid ah jidhka, kuwaas oo leh qaabab kala duwan oo qofka lagu garan karo, loogana sooci karo dadka kale.
Maqaarka ama haragga qofka ee gacanta ayaa sidoo kale leh qaab gaar ah oo uu qof kasta oo kale uu kaga duwanyahay samays ahaan.
Prof Sue ayaa waxa ay sheegtay in carjawda ciddida meesha ay ku dhamaato ah ay qof dambiile ah ku aqoonsatay, kaas oo markii dambe dambigii lagu heley arrintaas darteed.
Kadib, Sanado badan oo shaqo iyo tijaabo ah, Prof Sue waxa ay keydisay xog ku filan oo caddeyn u noqon kara arrimahan cusub ee ay sheegtay, waxayse qabtaa in loo baahan yahay cilmi baadhis dheeraad ah iyo tijnoolajiyad arrintan lagu sii horumariyo, lagagana dhigo mid dhaqan-gal ah.
Previous: “Qaamuska Siyaasadda Ha Laga Baadho Xisbi Doorasho Uu Helay Amaahiyey Xisbi Kale..” Madaxweynaha Oo U Jawaabay Cirro
Next: Urur Loogu Magac-daray ‘Berbera Iyo Beri-samaad’ Oo Laga Furay Berbera